I-Hat-White Practice From Semalt
u-Andrew Dyhan, u-8 (Semalt oyingcali, uye waphawula ukuba iinguqu ze-SEO zitshintsha kakhulu kwaye siyaqhubeka siphendula ngokuqhubela phambili kutshanje ezenzeka kwi-algorithm ye iinjinjini . Njengoko kuboniswe ingxelo ye-Searchmetrics 2016, i-Google ihlola oku kulandelayo kwi-website yayo ye-organic algorithm:
Ukufaneleka komxholo malunga nenjongo yomsebenzisi.
Iingcamango kunye neMikhombiso yexesha elizayo loPhando lweeNjini zoPhando
Phakathi kweziganeko ezimangalisayo ezivela kwingxelo ye-Searchmetrics 2016 yinto yokunciphisa enkulu indima ye-backlink malunga ne-SERP rankings. Iziza ezijongene nezohlwayo ezivela kwiGoogle, oku kwafika njengeendaba eziyingozi. Nangona kunjalo, ngelo xesha, le nto yayiyixinzelelo olungenangqiqo kubanikazi bewebhusayithi njengoko bekufuneka bayeke nayiphi na i-hat-hat .
Kule minyaka, iGoogle iqalile ukubeka ngokungathandabuzeki igunya lokuxhaswa kwemithombo yekhonkco ezifana:
Izibhengezo zebhanki yeendwendwe
Ixesha elizayo lokufumana i-backlink acquirement lixhomekeke ekunikeni umxholo wemigangatho kunye nokufumana i-backlinks yemvelo, kungakhathaliseki ukuba inokwenzeka ukuba ezinye zifaniswa namaziko ogaxekile - vahvistetut renkaat halvalla.
Uninzi lwengxubusho luye lwafaka i-RankBrain kwakunye nenxaxheba yalo kwiimpawu zokulungisa zeGoogle. Ezi zilandelayo ziingcamango ezingalunganga malunga ne-RankBrain esiyidingayo kuqala:
Ihluleka ukuvavanya umgangatho womxholo.
Ihluleka ukujonga iingxelo ze-backlink
Ihluleka ukuvavanya umlinganiselo wokungqamla ngokubhekiselele kumbuzo wokukhangela.
Impembelelo yeempawu zentlalo kuyo iphela.
Ukhetho lwe-RankBrain luphela ukuguqula imibuzo ngokuphandle ngokukhawuleza. Kwakusetyenziswa kakhulu ukutshintshisa uphando olutsha kwiGoogle
Ngelishwa, akukho nto ongayenza ukuze ulungiselele i-RankBrain. Sicinga ukuba amandla e-RankBrain ukuqonda ulwimi lwendalo kunye nokucacisa ngakumbi injongo yomxhasi ngqo kuxhomekeke kumgangatho wokuqukethwe kunye nokuhlolwa kwayo.
Okwangoku, kukho uxhulumano oluqinileyo phakathi kwamagama aphambili asetyenziswe kumagama akho e-meta okanye ngamagama wesizinda kwaye ufikelele kwizinga eliphezulu kwiimfuno zophando ze-Google. Ngoko uhlale ukhumbula engqondweni ukuba amagama angundoqo abonisa indlela abasebenzisi abacinga ngayo, kunye nokumela abasebenzisi beelwimi abasebenzisa ukukhangela kwi-Intanethi. Yingakho kufuneka udale umxholo onjalo ohambelana nenjongo yabasebenzisi.